Firefox 71 ikozvino inowanikwa kubva kuMozilla's FTP server | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 71 ikozvino inowanikwa kubva kuMozilla's FTP server. Kumisikidzwa zviri pamutemo mumaawa makumi maviri nemana
Nguva pfupi yapfuura isu takaburitsa chinyorwa umo isu takakuudza iwe nezve chisina kujeka kuvhurwa: Linux Mint 19.3 Beta ikozvino inogona kurodha pasi, asi kuburitswa zviri pamutemo (kwete kugadzikana) kuchave mangwana. Mangwana pachavezve nekuburitswa zviri pamutemo, mune ino nyaya yakagadzikana: Firefox 71 Ichasvika mukati maawa makumi maviri nemana. Asi kana isu tiri kunyora chinyorwa ichi nhasi ndechekuti, seye beta yeiyo inotevera vhezheni yeLinux Mint, iyo v24 yeakava browser yave kuwanikwa kurodha pasi.
Kusimbirira izvo kuvhurwa kwacho hakusi pamutemoVashandisi vanofarira vanogona kutora iyo nyowani vhezheni kubva kuMozilla's FTP server, iyo iwe yaunogona kuwana kubva pano. Sezvauri kuona, iyo nzira inoonekwa pamusoro ndeye /pub/firefox/releases/71.0, uye muchikamu che "Kuburitswa" chete "Yakaburitswa" shanduro dzinoonekwa. Izvi zvinoreva kuti izvo zviripo izvozvi zvakafanana mangwana, kuti tikwanise kuisa vhezheni itsva maawa makumi maviri nemasere.
Firefox 71 ichaunza itsva Kiosk modhi
Panguva yekunyora, uyezve, iro runyorwa rwezvinhu zvitsva zveFirefox 71 haisati yaziviswa. Iyo peji kwavanenge vachisanganisirwa yatobvumidzwa (pano), asi ivo havazowedzere nhau kudzamara kuvhurwa kuri pamutemo. Ehe, vamwe vanozivikanwa vaive vatove inowanikwa mune yazvino beta, senge nyowani Kiosk modhi izvo zvinotibvumidza isu kuvhura chiitiko cheFirefox matinopinda mukati chaimo muzere skrini uye hatizowana mukana we URL bar. Kuti tivhure, isu tichafanira kunyora "firefox -kiosk", isina makotesheni, mune terminal.
Imwe yedzakakurumbira misiyano, uye sezvineiwo zvakajairika, ndeyekuti vashandisi veWindows vane mukana wekuona mavhidhiyo mukati Mufananidzo-mu-Mufananidzo: kutanga neFirefox 71 paWindows, patinoridza vhidhiyo kubva kumasevhisi akadai seYouTube, bhokisi diki rebhuruu richaonekwa kurudyi iro rinotibvumira kubvisa vhidhiyo mubrowser. Vashandisi veLinux vanofanirwa kumirira vhezheni yerudzi rweMozilla browser kana ita kuti iite nemaoko kubva pamusoro: config.
Kana, seni, iwe uchida kumirira kuvhurwa zviri pamutemo, Firefox 71 ichaonekwa seyakagadziriswa mangwana paWindows, macOS uye mune bhaisinari vhezheni yeLinux, asi isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kana izvo zvatiri kushandisa iri vhezheni kubva kumahofisi epamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 71 ikozvino inowanikwa kubva kuMozilla's FTP server. Kumisikidzwa zviri pamutemo mumaawa makumi maviri nemana
Yakaburitsa vhezheni itsva yePCB dhizaini software, LibrePCB 0.1.3
Iwe unogona ikozvino kurodha beta yeLinux Mint 19.3 "Tricia", asi kuvhurwa kuchave kuri pamutemo mangwana